Afrikaankii ugu horeeyay ee hawada sare tagi lahaa oo geeriyooday -
HomeWararkaAfrikaankii ugu horeeyay ee hawada sare tagi lahaa oo geeriyooday
July 8, 2019 F.G Wararka 0
Nin u dhashay dalka Koonfur Afrika oo ahaa ninkii ugu horreeyey ee Afrikaan Madoow ah oo ku guulaystay fursad uu ku tago hawada sare, islamarkaasna noqda cirbixiyeen ayaa shil ku geeriyooday ka hor inta aanu riyadiisii xaqiijin.
Mandla Maseko, oo 30 jir ahaa, ayaa Sabtidii dhintay, sida ay qoyskiisu sheegeen.
Sannadkii 2013-kii, ayaa ninkan oo xubin ka ahaa ciidamada cirka ee Koonfur Afrika waxa uu dad gaaraya hal milyan kaga guulaystay in uu ka mid noqdo 23 fursadood oo ka bannaanaa Akaadeemiyadda hawada sare ee Maraykanka.
Ninkan ayaa lagu naynaasi jiray Afronaut iyo Spaceboy, Maseko ayaana ka soo jeeday magaalada Pretoria.
Toddobaad ayuu soo joogay xarunta Kennedy Space Centre ee kutaal gobolka Florida asagoo samaynayey tijaabooyin uu ugu diyaar garoobayey in uu raaco dayax gacmeed saacad qaadanayey.
Maseko ayaa horay u sheegay in uu doonayo in uu sameeyo waxyaabo uu ku dhiirri galinayo dadka da’yarta ah.
Waxa uu BBC-da u sheegay in uu qorshaynayo in uu hawada sare kasoo Waco. “Waxaan ku rajo waynahay in aan helo khad la isticmaali doono sanooyin badan oo soo socda – sida Neil Armstrong uu sameeyey oo kale,” ayuu yiri.